Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Latin America Airbnb Ọkacha mmasị ọhụrụ iri na abụọ
Nke a bụ mpaghara jupụtara na omenala, akụkọ ihe mere eme na nnukwu ihe nkiri nlegharị anya nke n'afọ ndị na-adịbeghị anya abawanyela na ewu ewu n'etiti ndị njem si United States. Na mgbakwunye, inwe obodo Latino buru ibu, a na-enwekarị usoro njem na mpaghara ahụ iji wulite ma jikwaa mmekọrịta ezinụlọ nke dị mkpa taa karịa mgbe ọ bụla.
Dabere na data sitere na Airbnb, mpaghara Latin America aghọwo ihe na-emekarị maka ndị njem si US. Dabere na ọnụọgụ ọchụchọ emere n'elu ikpo okwu, obodo iri na abụọ kacha ewu ewu na Latin bụ:
2. Santo Domingo, Dọminikan Ripọblik
A bịa n'oge ọkọchị, ebe ndị kacha ewu ewu bụ osimiri, ọkachasị na Mexico ebe Playa del Carmen na Ensenada na-aga njem na 2021, na-ebili ọnọdụ 6 ma e jiri ya tụnyere 2019, yana Tulum, nke sitere na nọmba 7 ruo nọmba 3. na ndepụta, dabere na ọnụọgụ ọchụchọ. Ebe njem obodo pụtakwara na ndepụta ahụ, gụnyere Mexico City na Medellín, bụ́ ndị a ma ama maka onyinye ọdịbendị ha dị elu.
Mpaghara a na-anọchite anya nhọrọ enwere ike ịnweta maka ndị ọbịa North America nwere nkezi ọnụ ahịa kwa abalị na-erughị 150 USD.
Ọ bụghị naanị na ndị njem US na-achọ ebe ndị na-enye ihe nkiri ọdịnala na ụzọ mgbapụ n'ụsọ osimiri, mana ọtụtụ ndị obodo Latinx na-achọ ka ha na mgbọrọgwụ ha wee gaa na ebe ha si hụ nne na nna, nne na nna ochie na ndị ezinụlọ ha. Airbnb na-enye ohere nke ịchọta ụlọ n'obodo ukwu na obere obodo n'akụkụ niile nke mpaghara ahụ, "Stephanie Ruiz, Onye isi Nkwukọrịta maka Latin America kwuru.